‘यसरी भएको थियो प्रचण्डसँग मेरो विवाह’ · Aawaj Nepal
आवाज नेपाल, २०७६ वैशाख २६ बिहीबार
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा उनका धर्मपत्नी सीता पौडेलबीच विवाह भएको ठीक ५० वर्ष पुगेको छ । विवाहको सुनौलो वर्षगाँठको यो अवसरमा प्रचण्ड–सीता दम्पत्तिबीच पुनः सिन्दुर हालेर विवाहको कार्यक्रम आज बेलुकी ५ बजेतिर सम्पन्न हुने कार्यक्रम रहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रचण्ड र सीताबीच कसरी विवाह भएको थियो ? हिजोका कठीन भूमिगत कालहरुमा पारिवारिक गर्न केकस्ता कठिनाईहरु भोग्नु परेको थियो ? युद्धकालका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डका पत्नी सीताको भूमिका के कस्तो रहेको थियो ? लगायतका सन्दर्भमा सीता पौडेल दाहालसँगको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘विप्लवसँग राज्य किन यति बढी तर्सिएको ?’
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ले एनिलाई दियो एउटा अर्को उच्चाई (अन्तरवार्ता सहति)
सारङ्गीसंग जीवनका कयौँ दिन र रात विताएका बर्ता गन्धर्बसंगको कुराकानी मंगलबार राती नौ बजे…प्रत्यक्ष
संविधान कुनै जुवाको दाउमा च्याँखे थापेर आएको होईन्, यो जनताको अथक प्रयासले आएको हो